Ehime mandarina -China Yixinhe Trading
Zavatra Ehime volomboasary manana endrika boribory, loko volomboasary maizina, solika sela manify, malama, fijery tsara tarehy, mora Peel. Sugar 15 °, asidra 0,5 ° etsy ambany, tsy misy nokleary, tsara tsiro tain-drendrika, hanitra sy mamelombelona, ​​tsara tsirony. Mahatohitra ny fitehirizana, mangatsiaka fanoherana, vokatry tsara, ny vokatry ny kofehy, dia tena tany am-boalohany mampanantena fahamatoran'io karazana Citrus. Fampihenana ny asidra tany am-boalohany, Ehime Citrus amin'ny farany Novambra manana tsiro tsara indrindra, fa tamin'ny tapaky ny volana Novambra ny tsena. Ehime Citrus sy Nankou matotra ...
Zavatra Ehime volomboasary manana endrika boribory, loko volomboasary maizina, solika sela manify, malama, fijery tsara tarehy, mora Peel. Sugar 15 °, asidra 0,5 ° etsy ambany, tsy misy nokleary, tsara tsiro tain-drendrika, hanitra sy mamelombelona, ​​tsara tsirony. Mahatohitra ny fitehirizana, mangatsiaka fanoherana, vokatry tsara, ny vokatry ny kofehy, dia tena tany am-boalohany mampanantena fahamatoran'io karazana Citrus.
Fampihenana ny asidra tany am-boalohany, Ehime Citrus amin'ny farany Novambra manana tsiro tsara indrindra, fa tamin'ny tapaky ny volana Novambra ny tsena. Ehime Citrus sy Nankou matotra miaraka amin'izay koa fe-potoana, nefa Ehime Citrus manana bebe kokoa malefaka tain-drendrika, ka tsy manan-mitsinkafona hoditra, handresy ny fahalemeny ny Nankou ny tsy fahampian-drano, Ehime no tsara indrindra hanolo samy hafa ny Nankou, mety ho an'ny isan-taona eo ho eo ny hafanana 16C ° fambolena , dia tsara ihany koa ny karazam-biby ao amin'ny faritra avaratr'i sisin'ny Citrus.
Ehime Citrus dia precocious. Mikasika ny ankapobeny Miscellaneous voasary matotra nandritra ny iray volana na mihoatra. Tsara mba hameno ny toerana banga Citrus fe-potoana ny tsena. Voankazo vokatra araka ny Citrus voankazo fahamatorana, mampiasa, tsena mila mba hamaritana ny fotoana fijinjana. Orana sy ny voankazo raha paty tankina tsy mioty vokatra. Voankazo mpiasa dia tokony hanao fonon-tanana, miaraka amin'ny voankazo boribory cutter hanapaka voankazo amin'ny voankazo miara-tahony, ary avy eo dia manapaka ny voankazo pedicle, moramora. Ao ny lamin 'avy any ivelany ho ao anatiny, hatrany ambony ka hatrany ambany mba haka voankazo. Mitaky ny voankazo rehetra fitoeran-javatra malama manda, mijinja ny vokatry tokony avy hatrany ny fonosana nentina nankany an-tsaha na ny fitehirizana. Ialao ny masoandro sy ny orana.
Ehime mandarina Wholesale
Fresh Cirtus voankazo
Anarana iombonana amin'ny Citrus
Anarana iombonana amin'ny Orange Voankazo
Anarana iombonana amin'ny Orange Sale
Wholesale Ehime mandarina